December 24, 2020 - Khitalin Media
အပျိုဗိုက်ဆိုတာ ၅ လလောက်မှ နဲနဲလေးပူလာတာဆိုတော့
December 24, 2020 by Khitalin Media
၁၅ မိနစ် စာလောက်နဲ့ ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို မလဲကြပါနဲ့…. Single Mother ညီမလေး တစ်ယောက်ကို လူမသိ သူမသိအောင်က လေးမွးဖို့ ကူညီပေးလိုက်တာကို ပိုစ်လးတင်လိုက်တယ်…. မကြာပါဘူး….နောက်နေ့ကစလို့ ညီမလေး တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ….. ချက်ဘောက်ကနေ ဖုန်ကန ၊ မတ်စိတ်ကနေ ၊ အကူအညီလာတောင်းကြတော့တာပဲ….. ပရိုဖိုင် အမှန်နဲ့ မိကောင်ဖခင် ပညာတတ် ညီမလေးတွေ ကျွန်တော့် ဖုန်ဆက်ပြီး ငိုယို တိုင်ပင်ကြတယ်…. တစ်န့တစ်နေ့ ဒီညီမလေးတွေနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီး အားပေးရတာ အလုပ်တစ်ခုကို ဖြစ်လို့…. တစ်ချို့က မိဘအိမ်မှာ(ဗိုက်လေးပူလာတဲ့ သမီးလေးကို မိဘက ၀လာတယ်ပဲ ထင်နေလေရဲ့….. တစ်ချို့က တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ (ယူမယ်လို့ ခိုးပြေးပြီးခါမှ တစ်ယောက်ထဲထားခဲ့တာ…. တစ်ချို့က တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတတ်နေတယ်…. … Read more
3 မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ….
တစ်ကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ ဖာခေါင်းများသို့ပေးစာ ယခုခေတ် လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြ​စေလိုပါတယ်​​နော်​. a´ ” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ “b´ ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီးတစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအနည်းငယ်အကြာ……bဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ”aဒီလိုပါပဲကွာ ” အဆင်ပြေပါတယ် ”bငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ပြီးပြီလားa” ဟာ ” မဖြစ်ရသေးပါဘူးကွာဒီတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ကြတာပါကွbမင်းကလဲ ညံ့လိုက်တာကွာ,,,ဒီခေတ်က ကိုယ်မစားရင် ” သူများစားတဲ့ခေတ်ကွ ”a” ဟင် ” ဟျောင့် ဘာဆိုင်လို့လဲကွ…b” အေးမှတ်ထား … Read more
ဆံပင်ဖြူကိုဆိုးဆေးမသုံးပဲပြန်မနက်နိုင်ဟုထင်ကြသည်။ကြောင်လျှာသီးကို ပေါ်သောရာသီတွင်နှစ်လခန့် နေ့စဉ်ပြုပ်၍အတို့အမြှုပ်လုပ်၍၎င်း။ကြော်ချက်အဖြစ် ၎င်း။မီးဖုတ်ပြီးကြက်ဥနှင့်ရောကြော်၍၎င်းတစ်နည်း နည်းဖြင့် နေ့စဉ်စားသုံးပေးလျှင်ဆံပင်ဖြူများပြန်နက်လာစေနိုင်သည်။ ကြောင်လျှာပွင့်ခြောက်များကိုပေါသောရာသီတွင် ဝယ်ယူစုဆောင်းပြီးစဥ့်အိုးငယ်တွင်သိပ်၍ တစ်နှစ်လုံးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ။ အပွင့်ကိုရေနွေးဖျော၍သုပ်စားလျှင်လေဆက်စေသည်ဟုရှေးလူကြီးများပြောသည်။လေအားကောင်းစေသည်။ နားလေထွက်ခြင်း။နားပင်းခြင်း။အသက်ကြီး၍နားလေးခြင်းများအတွက်ကောင်းပါသည်။ (သွေးတိုးရှိသူများကတော့ သတိထားစား၊သွေးကျဆေးသောက်ပါ) ဆေးကျမ်းများမှ(အဆို) ၁။ ကြောင်လျှာသီးကိုကြက်သားနှင့်ချက်စားပါကပန်း နာ(ရင်ကြပ်)ရောဂါပျောက်သည်။ ၂။ ငါးရံ့ဖြင့်ချက်စားပါက ကာလဝမ်းရောဂါပျောက်ဧ။် အားကိုဖြစ်စေပြီးအစာမကြေဝမ်းပျက်ပျောက်ဧ။်။ ၃။ ပုဇွန်ဖြင့်ချက်စားပါကနှလုံးလေရိုက်ရောဂါ။ နှလုံး တုန်ရင်တုန်ရောဂါပျောက်ဧ။်။ ၄။ ငါးသလောက်ဖြင့်ချက်စားပါကအဖောရောဂါကျစေ ၍နှလုံးရောဂါကိုသက်သာစေသည်။ ၅။ ငါးမြွေတိုးနှင့်ချက်စားကဒူလာသွေးဝမ်း။မီးယပ်သွေးဝမ်း။မြင်းသရိုက်(လိပ်ခေါင်း) ရောဂါတို့ပျောက်ကင်းစေနိင်ပါသည်။ မှီငြမ်း။ ။ ဒေါ်မေမေပွင့်(တိုင်းရင်းမေ)ဓာတ်စာကုထုံး။ မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်များ(မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း)လယ်.စိုက်.ရှင်း ၁၅.၅.၁၉၈၀ထုတ်။ ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) ရတနာပုံသတင်းစာ။ သွေးတိုးနှင့်တည့်မတည့်မေးသူများအတွက် ၁။အပူသွေးတိုး နှင့် ၂။အအေးသွေးတိုး ဟုနှစ်မျိုးရှိသည်။ အလွယ်ပြောရလျှင် လူပိန်၊မဲများသည် အပူသွေးတိုးရှိတတ်သည်။ သွက်လက်သည်။ဒေါသကြီးသည်..လူဖြူ၊ဝ၊စို၊အသားအရေအေးသူများ၊ဇိမ်ခံသူများတွင် အအေးသွေးတိုးရှိတတ်သည်။ အအေးသွေးတိုးသည် ဆီးချိုနှင့်တွဲဖြစ်တတ်သည်။ သွေးတိုးသည်. လေတိုးဟုလည်းယူဆသဖြင့်. (အခါးဟူသမျှ၊လေဓာတ်ကြွ) … Read more
ဆီးမထွက်တာတွေ ဓမ္မတာလွန်တာတွေ အတွက်၁၅ မိနစ်လောက်အတွင်းကောင်းတဲ့ဆေးနည်း လာပါပြီ
“အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ” ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတစ်ပါး..တဲ့ အာရောဂျံ = အနာရောဂါ၊ ပရမံ = မြတ်သော၊ လာဘံ = လာဘ်မည်၏ …လို့ မြန်မာ့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်…ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံးသော ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲ…ကျန်းမာမှ စားချင်တာစားနိုင်၊ သွားချင်တာ သွားနိုင်၊ လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင် မယ်လေ…. အဲဒီ့အတွက် “ယောက်ကျားမှာဆီး-မိန်းမမှာမီး”လို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခု ရှိလာပြန်ပါတယ်… ယောက်ကျားလေးတွေဟာ ဆီးကောင်းမယ်..မိန်းကလေးတွေကတော့ သွေး ကောင်းမယ်ဆို ဘာရောဂါမှအလွယ်တကူမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး…ဒါကြောင့် ဆီးနဲ့ မီးကောင်းဖို့ အတွက် အထူးဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်… အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆီးမထွက်ခြင်းနဲ့ ဓမ္မတာလွန်ခြင်းတို့ကို ၁၅မိနစ်တည်းနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ အဖိုးတန်ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်… အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ သောက်ရမှာကြောက်သူတွေအတွက် သောက်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူသုံးနိုင်မယ့် မြန်မာဆေးနည်းလေးပါပဲ…လယ်ကန်စွန်းလို့ တစ်ချို့ကခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ကန်စွန်းရိုးနီရဲ့ အစွမ်းနဲ့ ဆီးအိမ်မှ ဆီးမထွက်ခြင်းနဲ့ … Read more
မုန်ညင်းဆီ ဘယ်လောက်စွမ်းလဲ ဆိုတာ လူအများသိအောင် ဝေမျှပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ
မုန်ညင်းဆီ ဘယ်လောက်စွမ်းလဲ ဆိုတာ လူအများသိအောင် ဝေမျှပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ မုန်ညင်းဆီ ဘယ်လောက်စွမ်းလဲ ဆို တာ လူအများ သိအောင် ဝေမျှပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ. ညအိပ်ယာမ၀င်မီ ၃မိနစ်ခန့် ခြေဖဝါးကို မုန်ညှင်းဆီ ပွတ်လိမ်းခြင်းဖြင့် *သွေတိုးခြင်းမှ ထိန်းပေးသည်။ *အမျိုးသားခွန်အား တိုးစေသည်။ *မှတ်ဥာဏ် အားကောင်းစေသည်။ *နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေသည်။ *လန်းဆန်း တက်ကြွစေသည်။ *အဆီကျစေသည်။ *မျက်စိ အားကောင်းစေသည်။ *မျက်စိ ပါဝါများသူအနေဖြင့် လျော့နည်းစေသည်။ *အာရုံကြော အားနည်းသူများအတွက် သင့်လျော်သည်။ *ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေသည်။ *ဒူးနာ ခါးနာသူများ သက်သာစေသည်။ *၀မ်းချုပ်သူများ အစာအိမ်ရောဂါရှိသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ *အချိန်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည်။ *ခြေထောက် ဖောရောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ Credit : စိတ်မဆိုး တိုင်းရင်းဆေးမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ … Read more
သည်းသည်းလှုပ် ချစ်မပြတတ်ပေမယ့် သင့်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ ချစ်သူဆိုတာ ဒီလိုပါ
သည်းသည်းလှုပ် ချစ်မပြတတ်ပေမယ့် သင့်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ ချစ်သူဆိုတာဒီလိုပါ ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့အတူ တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံရတဲ့သူပါပဲ။ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေက သည်းသည်းလှုပ်တော့ ချစ်မပြတတ်ပေမယ့် တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့အပြုအမူကနေတစ်ဆင့် သိလို့ရပါတယ်။ သင့်ချစ်သူဟာ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်အရမ်းကံကောင်းပါတယ်။ (၁) သင့်အကြိုက်လိုက်တယ် ယောက်ျားလေး တော်တော်များများက သူတို့ပဲဆုံးဖြတ်၊ သူတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူကတော့ သင့်ကိုအလိုလိုက်တယ်၊ သင့်ဆန္ဒတွေကို လိုက်လျောပေးတယ်၊ သင့်အလိုကျ လိုက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားလို့ပါ။ သင်ပျော်ရွှင်ဖို့က သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သလို၊ သင်ပျော်နေရင် သူလည်းပျော်တာကြောင့် သင့်အကြိုက်တွေကို အမြဲလိုက်ပေးနေမယ့်သူပါ။ (၂) ဖြည့်ဆည်းပေးတယ် သင့်ချစ်သူဟာ သူများတွေလို ကဗျာဆန်ချင်မှဆန်မယ် ဒါပေမယ့် သင့်အတွက် အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးတတ်တဲ့သူပါ။ သင်ကြိုက်တတ်တဲ့ မုန့်လေးတွေဝယ်လာပေးတာမျိုး၊ သင်လိုအပ်နေတဲ့ … Read more
နံနံ၊ ပူစီနံ ၊ ပင်စိမ်းတို့၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
နံနံ၊ ပူစီနံ ၊ ပင်စိမ်းတို့၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ နံနံပင်၊ပင်စိမ်း ၊ပူစီနံ သုံးမျိုးလုံးမစားတဲ့သူတွေ ရှိကြလားဗျ သုံးမျိုးလုံးစားတဲ့သူကတော့ရှားမယ်ထင်ပါတယ် အနည်းဆုံးတစ်မျိုးကိုတော့စားသင့်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအတွက်အရမ်းအကျိုးပြုတဲ့ အရွက်လေးတွေဖြစ်နေလို့ပါ ကောင်းကျိုးလေးတွေအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် နံနံပင် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနိစ်ဓာတ်တွေ နံနံပင်မှာ အံ့သြသင့်လောက်အောင် ပါဝင် နေပါတယ်။ အစာခြေအားကောင်းအောင် အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်သလို အသည်း လုပ်ဆောင်ချက် တွေကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ နံနံပင်က ဆီးချိုသမားတွေ လက်စွဲထားသင့်တဲ့ အရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း အင်ဆူလင်ဓာတ် ထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။ နံနံပင်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် ကေ က အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ မဖြစ်အာင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နံနံပင်က မျက်စိအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်စေတဲ့ အရွက်ပါ။ နံနံပင်မှာပါတဲ့ … Read more
မိန်းကလေးတွေ ဘ၀ လက်တွဲဖော်ရှာရင် ဒီအချက်တွေကို အရင်ကြည့်ပါ
ပထမဆုံး First impression အပြည့်အဝရဖို့လူတစ်ယောက်မှာဥပဓိရုပ်ကလည်းအရေးပါပါတယ်။ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်ရှာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရည်ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တဲ့အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအချက်တွေလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမေချစ်သားမဟုတ်ဘူး ဒီလိုပြောလို့မိဘကိုမိဘမှန်းမသိ၊မိဘနဲ့သားသမီးကြားကသံယောဇဉ်ကိုအသိအမှတ်မပြုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အရွယ်ရောက်ပြီးသားယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာအရာရာကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်နဲ့ဘဝကိုရှင်သန်ဖြတ်သန်းသင့်ပါတယ်။တခါတလေသားတွေအပေါ်ထားတဲ့အမေတွေရဲ့မိဘမေတ္တာတွေကအဲဒီသားအတွက်ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေအကြပ်အတည်းတွေဖြစ်စေပါတယ်။မိခင်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ကိုယ်ပိုင်မိသားစုကိုတစ်ခုကိုဦးဆောင်ထူထောင်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။သားမက်နဲ့ ယောက္ခထီးဆက်ဆံရေးထက် ချွေးမနဲ့ယောက္ခမဆက်ဆံရေးက ပိုပြီးကိုင်တွယ်ရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ချစ်ခင်တယ်၊ကာကွယ်ပေးတယ် မိန်းကလေးတွေ လက်တွဲဖော်ရှာတယ်ဆိုတာယေဘုယျအားဖြင့် အဲဒီယောက်ျားကို အားကိုးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သူဟာ ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရသူကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာဆားမပါတဲ့ ဟင်းလို ပေါ့ပြတ်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြသူ အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုဦးဆောင်မယ့်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာအရာရာကိုဦးဆောင်လိုစိတ်၊မိသားစုအတွက်ခွန်အားတွေပေးနိုင်တဲ့တက်ကြွမှုတွေရှိနေသင့်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေသူဖြစ်သင့်ပါတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲအခက်အခဲတွေ့တိုင်းစိတ်ပျက်အားလျော့ပြီး လေးတိလေးကန်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ ထိန်းချုပ်တတ်သူမဟုတ်ဘူး ဦးဆောင်လိုစိတ်ရှိတာနဲ့ အရာရာကိုထိန်းချုပ်ပြီးသူ့အစီအစဉ်အတိုင်းလိုက်နာစေတာအဓိပ္ပာယ်မတူပါဘူး။ခေါင်းဆောင်နဲ့ အမိန့်ပေးသူလိုသိသိသာသာကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့လက်တွဲဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ယောက်ျားထက်အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ထိန်းကျောင်းလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူမရူဘူး များသောအားဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေဟာ ခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်ဘူး၊စိတ်ရှုပ်မခံနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ခံစားချက်တွေထက်လက်တွေ့ကိုပဲပိုပြီးဦးစားပေးလေ့ရှိပါတယ်။တခါတလေခံစားချက်တွေကိုလျစ်လျူရှုခံရတာကလည်းလူရာမဝင်သလိုခံစားရ စေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲဦးစားပေးစဉ်းစားပေးဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမယ့်သာယာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ခံစားချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ Credit : Aunty may Unicode ပထမဆုံး First impression အပွညျ့အဝရဖို့လူတဈယောကျမှာဥပဓိရုပျကလညျးအရေးပါပါတယျ။ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ဘဝလကျတှဲဖျောရှာတော့မယျဆိုရငျတော့ရုပျရညျထကျပိုပွီးအရေးကွီးတဲ့ဦးစားပေးရှေးခယျြသငျ့တဲ့အခကျြတှရှေိနပေါတယျ။ဘယျလိုအခကျြတှလေဲဆိုတာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ … Read more
ပိုက်ဆံပြတ်နေလျှင်ဆန်စေ့အနည်းငယ်ကိုပိုက်ဆံအိတ်ထဲဆောင်ထားပါငွေကြေး၊အလုပ်အကိုင် နှင့်ပတ်သက် သော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသူများအတွက် ကုစားနိုင် သည့်နည်း ၃မျိုးရှိသည်။ပိုက်ဆံပြ တ်နေလျှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကိုပိုက်ဆံအိတ်ထေဲဆာင်ထားပါ။သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အတွက်ြ ဖစ်စေ၊ငွကြေးတိုးပွားစေရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ နည်းများမှာ၊ဆန်ကိုအသုံးပြုခင်းပါဝင်ပြီးဆန်သည်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ဆန်ကိုမင်္ဂလာရှိသည့်ကိစ္စများတွင်သုံးသည်။ပြီးပြည့်စုံသည်သို့မဟုတ်မည်သို့မျှခွဲ၍မရနိုင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ (၁) အလုပ်မှာအဆင်မြေ ပသူများ၊သာကရောက်သူများ၊အလုပ်ရှာနေသူများသည်မိမိကောင်းကံနှင့်အိမ်မက်တွေ ပြည့်စုံလာစေရန်ချိုသောထမင်းကိုကျီးစားကျွေးရမည်။ကျိုထားသောထမင်းထဲသို့သကြားထည့်ပြီးနေ့စဉ်ငှက်စာကျွေးပါ။ (၂)ထ မင်းကိုအခြောက်လှန်းပြီးပိုက်ဆံ အိပ်ထဲဆောင်ထားပါ။ လပ်ချမီး မယ်တော် ပိုက်ဆံတွေပြည့်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ဆွမ်းဆန်အဖြစ်လောင်းလျူခြင်း၊မရှိဆင်းရဲသားများအားပးကမ်းခြင်းကိုတနင်္လာနေ့တွင်ပြုလုပ်ပါ။ပိုက်ဆံအခက် အခဲများ ပြေလည်သွားပါလိမ့်မည်။ (၃)ကံကောင်းစေရန်အတွက်လသည်နက္ခတ်ဗေဒအရနှင့်စိတ်စားချက်များအတွက် အကျိုးများသည်။အကယ်၍သင့်သည်နက္ခတ်ဗေဒအရဂြိုလ်အားနည်းလျင်သင့်အမေကိုခွင့်တောင်းပြီးလိုအပ်သူများအားဆန်လက်တစ် ဆုပ် နေ့စဉ်လျူပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်အတွက် တိုးတက်မှုေ တွစတင်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထက်မြက်သောဉာဏ်တွေက ဘဝအတွက် အေ ကာင်းဆုံးအခွင့်အရေးများကို ခွဲခြား ပေးရုံတင်မက၎င်းအခွင့်အရေးများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖမ်းဆုတ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ Unicode ပိုကျဆံပွတျနလြှေငျဆနျစအေ့နညျးငယျကိုပိုကျဆံအိတျထဲဆောငျထားပါငှကွေေး၊အလုပျအကိုငျ နှငျ့ပတျသကျ သော စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈနသေူမြားအတှကျ ကုစားနိုငျ သညျ့နညျး ၃မြိုးရှိသညျ။ပိုကျဆံပွ တျနလြှေငျ ဆနျစအေ့နညျး ငယျကိုပိုကျဆံအိတျထေဲဆာငျထားပါ။သကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျအတှကျွ ဖဈစေ၊ငှကွေးတိုးပှားစရေနျအတှကျဖွဈစေ၊လုပျဆောငျနိုငျပါသညျ။ နညျးမြားမှာ၊ဆနျကိုအသုံးပွုခငျးပါဝငျပွီးဆနျသညျဘဝတှငျကွုံတှရေ့သောပွဿနာမြားကိုဖယျရှားပေးနိုငျသညျ။ … Read more